I-Social Media Marketing Izokwanda ngo-2021 njengoba AbakwaBrands Babheka Ukuhlangana Nabathengi Ku-inthanethi
Abathengi abagcini ngokuthenga kaningi online, kepha maningi amathuba okuthi baqale uhambo lwabo lokuyothenga ezinkundleni zokuxhumana. Amapulatifomu omphakathi afana ne-Instagram ne-Facebook yimithombo ejwayelekile yokutholakala komkhiqizo futhi lokhu kulindeleke ukuthi kuqhubeke kuze kube ngu-2021, ngemininingwane emisha ekhombisa leyo mar ...
Izipho ezingaphelelwa yisikhathi ziqinisekisiwe ukunikeza induduzo yesitayela kuleli holide
Ngalesi sikhathi samaholide, ulwazi lokupha lungahle lubukeke luhluke kancane kepha ukuthola isipho esisezingeni eliphezulu kuseyinjongo. Njengoba isimo sezulu siba sibanda futhi abantu bezilungiselela ukuzimela emakhaya abo, abathengi kungaba ukuhlakanipha ukubheka izinto ezinikeza induduzo, ukuthula nentokozo. Ukupha ...
Yiziphi izicathulo okufanele ngizigqoke endizeni
Bona ngeso lengqondo lesi sigameko: usesikhumulweni sezindiza, izikhwama zigcwele, ugibela indiza yakho. Uthatha isihlalo sakho, ubophe ibhande futhi uhlale phansi. Ngemuva kwesikhashana, izinyawo zakho ziqala ukuba buhlungu ngoba awugqokile izicathulo ezifanele - futhi akukho okuningi ongakwenza ngakho uze ufike. Likuphi iholide lakho ...
I-New Balanc Release Year-Anniversary Anniversary Sneaker Yamaholide
INew Balance noJ. Crew bahlanganyele enye into ofuna ukuyengeza kuhlu lukaKhisimusi lwalo nyaka. Ukugubha iminyaka eyishumi eqhubekayo yokusebenzisana, imikhiqizo yakha isicathulo ongasigqoka ngezithukuthuku noma ama-slacks kule sizini samaholide. I-New Balance x J.Crew 997 Anniversary 10 inyonyobha ...
Izitayela ze-Adidas Yeezy Boost 380 'Onyx' Ziyakhipha Kuleli Sonto
Uhlangothi olusemaceleni lwe-Adidas Yeezy Boost 380 ku “Onyx” colorway. Umbhangqwana we-Adidas Yeezy Boost 380 colorways ushaya izitolo kuleli sonto. Lesi sikhondlakhondla sezemidlalo siqinisekisile ukuthi isicathulo esenziwe ngeKanye West siyadedela emicimbini eyimfihlo ye "Onyx Reflective" ne "Onyx" le F ...
Usuku luka-Alibaba lwama-Singles Ludonsela Ngaphezulu Kwezigidi ezingama-70 zamaRandi Ekuthengiseni Kuze Kube Manje
Ukubheka izinombolo ezenziwe ngu-Alibaba ngomcimbi wakhe waminyaka yonke wokuthenga weSingles 'Day. I-Alibaba isonge ngokusemthethweni umkhosi wayo we-12 waminyaka yonke we-11.11 Global Shopping Festival, owaziwa kakhulu emhlabeni wonke njengoSuku Lwabodwa. Ukulandela i-extravaganza yezitolo, isimemezelo se-e-commerce behemoth ...
I-Jumpman Shoe Nike's Auto-Lacing Tech ye-Iconic Air Jordan 11
UJordani Brand uletha ubuchwepheshe be-Nike Adapt kwi-Air Jordan eyi-iconic 11. Lesi sidlakela sezemidlalo siveze namuhla i-Air Jordan 11 Adapt, isicathulo esifakelwe ubuchwepheshe obufunwayo bokuxhuma amandla obuvela kwaSwoosh. Yize ubuchwepheshe bungobesimanje, uJordani Brand uveze ukuthi ukungabi nasici kwaba ...
Ama-Simpsons namaVans ahlanganisa kabusha amateki amasha kaKhisimusi afika okusha
Uhlangothi olusemaceleni lwe- “The Simpsons” x Vans Slip-On “Holiday.” Ama-Vans kanye ne "The Simpsons" baphinde bahlangana, kulokhu bakhipha iqoqo elisha lamateku abalandeli abazokwazi ukulenza ngokwezifiso.Umkhiqizo weskatewear kanye nomdlalo wamahlaya opopayi osudonse isikhathi eside ...
Ingabe Yilawa Amathrendi Asehlobo Olukhulu Kunazo Zonke Ehlobo?
Uma ubheke phansi amateki akho uzibuza ukuthi ngabe ukukhahlela kukababa wakho we-retro kuseyinto, sinazo zonke izimpendulo ozidingayo. Lo nyaka ungabonisa ukuqala kweminyaka eyishumi entsha, kepha ngandlela thile, ezinye izitayela zasehlobo ezibucayi zamateki zisibuyisela emuva esikhathini. (Memezela ku ...
Abasebenzi bezokwelapha emigqeni engaphambili ye-coronavirus kufanele baqiniseke ukuthi bahlanza izicathulo zabo.
Ocwaningweni olusha olushicilelwe komunye wamajenali eCentre for Disease Control and Prevention, i-Emerging Infectious Diseases, abacwaningi bahlole amasampula omoya naphezulu esibhedlela. Abaphenyi bathole ukuthi cishe isigamu sabasebenzi bezempilo abasebenza e-c ...
Umnotho Wobhadane: Yini Abathengi Abayithenga Ku-inthanethi Ngesikhathi se-COVID-19?
Izigaba Ze-E-Commerce Ezikhula Ngokushesha Kanye Nokwehla Ubhadane lwe-COVID-19 lunomthelela omkhulu kuzo zonke izici zempilo, kufaka phakathi indlela abantu abazithenga ngayo izidingo zabo, kanye nezidingo zabo ezingekho. Ngokuthengiswa okuthengiswa online okulinganiselwa ukufinyelela iso ...